आज फेरी बढ्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला मूल्य कति पर्छ…… – SUDUR MEDIA
April 6, 2021 April 6, 2021 AdminLeaveaComment on आज फेरी बढ्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला मूल्य कति पर्छ……
आज चैत २४ गते मंगलबार सुनको मूल्य फेरी बढेको छ । अघिल्लो दिन हिंजो सोमाबरको दिन सामान्य गिरावट आएको सुनको भाउ आज मंगलबार पुन बढेको हाे । आजको दिनमा सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रतिताेलाकाे ८७ हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ८७ हजार ५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज मंगलबार चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । आजको दिनमा चाँदी प्रतितोला १ हजार २३५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासँघले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, भोलिदेखि कारोबारमा आउने ! ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । मंगलबार कम्पनीले सार्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको ६६ लाख कित्ता सहित २ कराेड २० लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
नेप्सेले सूचीकरण सम्झौता भएको दोस्रो दिनबाट कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउने जनाएको छ । त्यस अनुसार भोलि बुधबार देखि कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउनेछ । कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेमा १२० रपैयाँ २९ पैसा देखि ३६० रपैयाँ ८७ पैसा ओपनिङ्ग रेन्ज तोकिएको छ । त्यस अनुसार बुधबारको कारोबार खुल्नेछ । कम्पनीको शेयरलाई नेप्सेले जेएलआई कारोबार संकेत दिएको छ ।
रु रु जलविद्युतको आइपीओमा ३६ गुणा बढी आवेदन ! रु रु जलविद्युतले सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको आइपीओमा ३६ गुणा भन्दा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको अनुसार आइतबार साँझसम्ममा ९ लाख ५३ हजार ४४२ जना आवेदकबाट १ करोड ३९ लाख ४० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको आइपीओको ३५.६५ गुणा धेरै हो।
रु रु जलविद्युत परियोजनाले चैत २० गतेदेखि प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल १२० रुपैयाँमा ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कुल निष्कासन मध्ये २ प्रतिशत अर्थात ८ हजार १५४ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात २० हजार ३८५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सो शेयर खरिदका लागि चैत २४ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ। सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा बैशाख ३ गतेसम्म म्याद थप गरिनेछ। सो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइआर त्रिपल बी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३२ करोड ६१ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। स्थानिय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ। मेरोलगानीबाट साभार